Nigeria Election 2019: Ka o si gaa na nkwado ntuliaka #Feb14 - BBC News Ìgbò
Nigeria Election 2019: Ka o si gaa na nkwado ntuliaka #Feb14
Ka o si aga na nkwado ntuliaka Naijiria nke afọ 2019
Ihe na-eme n' Anambara
Ihe mere n' Imo
Ihe na-eme n'Ebonyị
Ka ụbọchị dị na Benue
Ndi be anyị, ebe ka anyị na-apịachị nke taa.
Chebiri anyị echi.
Igbo biri kwa o! Ka ọ bọọnụ!
Ebisara na 19:30 Feb 14, 201919:30 Feb 14, 2019
Lekwa ihe ị ga-eme ma ịhụ ihe ekwesịghị
Ọnụ na-ekwuru ndị uweojii n'Ebonyị Steeti bụ Loveth Ọdah kwuru na ka dị 'kajaad' n'ihe gbasara ntuliaka a na-abịa.
Ọ nyere ndụmọdụ ka ndị mmadụ kpọọ ekwenti ha ma ha hụ ihe na-aga etu ekwesịghị.
Gee ihe o kwuru n'uju:
Video caption: BBC Nigeria 2019: Etu ndị uweojii n'Ebonyi steeti si akwado maka ntuliakaBBC Nigeria 2019: Etu ndị uweojii n'Ebonyi steeti si akwado maka ntuliaka
Ebisara na 19:13 Feb 14, 201919:13 Feb 14, 2019
Ndị Plateau na-eche ka chi Febụwarị 16 foo
Ntuliaka ga-eme n'abalị 16 nke ọnwa Febụwarị na-anọ ndị Plateau steeti ọkụ n'ọbi.
Akụkọ onye ntaakụkọ BBC nọ na Plateau wetara kwụrụ n'ụfọdụ agaala njem ọtụtụ kilomịta rute ebe ha kwesịrị ịnọ mee ntuliaka, chere eche.
Abụbakar Shettima, onye dị afọ iri isii n na otu ewerela ọnọdụ n'ebe o kwesịrị ịtụ vootuImage caption: Abụbakar Shettima, onye dị afọ iri isii n na otu ewerela ọnọdụ n'ebe o kwesịrị ịtụ vootu
Ebisara na 18:52 Feb 14, 201918:52 Feb 14, 2019
Ihe onyeisiala Buhari gwara ụmụ Naijiria n'abali a
Onyeisiala Muhammadu Buhari gwara ụmụ Naijiria n'abali a n' igwe ụlọọrụ ntaakụkọ NTA.
Ọ nọrọ ebe ahụ gụpụtara ihe ndị ọchịchị ya megara n' ọrụ mmepe obodo, ;okporoụzọ, okporoụgbọ oloko, nchekwa obodo na ibu agha megide mbụ.
O kwuru ka onye ọbụla buru ọganihu ọrụ ndị a n'obi dịka ntuliaka na-abịa.
Buhari dụrụ ndị ntoroọbịa ọdụ ka ha ekwela ka ndị ndọrọndọọ ọchịchị jiri ha gbaa okwe na ntuliaka a.
Mana aka chịbụrụ Ekiti bụ Ayo Fayose kwuru n'ozi Buhari ziri bụ ozi onyeisala na-apụ apụ.
Onyeisiala Muhammadu Buhari gwara ndị ntorobịa ha ekwela ka ndị ndọrọndọọ ọchịchị jiri ha gbaa okwe na ntuliaka a.Image caption: Onyeisiala Muhammadu Buhari gwara ndị ntorobịa ha ekwela ka ndị ndọrọndọọ ọchịchị jiri ha gbaa okwe na ntuliaka a.
Ebisara na 18:33 Feb 14, 201918:33 Feb 14, 2019
Aka aja aja, ọnụ mmanụ mmanụ
Ọ bụghị naanị ọrụ,ọrụ, ogbu opi na-eficha imi.
Dịka ndị na-arụ ọrụ metụtara ntuliaka na-arụ ọrụ ha, arụkata, atụọ ndụ mmadụ. E nwere ndị na-ere ihe ọrịrị na ọṅụṅụ na nso ụfọdụ ụlọrọrụ ndị Inec nọ ne be di iche iche
Ndi mmadu na-enweta onwe na nke nwaanyị abacha nọ nsọ ụlọọrụ Inec n'Ọka, Anambara steetiImage caption: Ndi mmadu na-enweta onwe na nke nwaanyị abacha nọ nsọ ụlọọrụ Inec n'Ọka, Anambara steeti
Nwaanyị abacha n'ụlọọrụ Inec n'Owere, isiobodo Imo steetiImage caption: Nwaanyị abacha n'ụlọọrụ Inec n'Owere, isiobodo Imo steeti
Nwaanyị a na-ere nrị na nsọ ụlọọrụ Inec na Kano a kpọrọ, 'Mama Amina' kemgbe afọ 1983(afọ 36 gara aga sị na ya na-aka ere ahịa oge ntuliakaImage caption: Nwaanyị a na-ere nrị na nsọ ụlọọrụ Inec na Kano a kpọrọ, 'Mama Amina' kemgbe afọ 1983(afọ 36 gara aga sị na ya na-aka ere ahịa oge ntuliaka
Ebisara na 18:06 Feb 14, 201918:06 Feb 14, 2019
Na Taraba, ndị uweojii sị na 'ọdeshi'
Onyeisi ndị uweojii na -anara mgbucha n'isi ụlọọrụ ha dị na JalingoImage caption: Onyeisi ndị uweojii na -anara mgbucha n'isi ụlọọrụ ha dị na Jalingo
Ndị uweojii n'isi ụlọọrụ ha na JalingoImage caption: Ndị uweojii n'isi ụlọọrụ ha na Jalingo
Na Taraba steeti ndị ọrụ ntuliaka ga-eme nabalị abụọ na-abia metụtara, ọkachasị ndị uweojii, adịla njikere.
Ndị uweojii mere mmegharị ahụ iji mee ka ọbara ha dị ọkụ.
Inec ,ngalaba nke Taraba kwuru na ha ebughachila akwụkwọ ntuliaka 'PVC' ndị nwe ha abịaghị were dị puku iri anọ na atọ, narị isii na irri abụọ na isii n'isis ụlọrụ ha dị n'Abuja maka ibuga ya ụlọakụ etiti ga-nye na-e mewa ntuliaka ọzọ.
Ọnụ na-ekwuru Inec na steeti ahụ bụ Fabian Yame kwụkwara na n'ime mmadụ dị 1,777,105 tinyere aha ha maka inweta akwụkwọ ntuliaka, naanị mmadụ dị 1,733,479 werela nke ha.
Ọnụ na-ekwuru Inec na Taraba steeti ahụ bụ Fabian Yame kwuru na ha ebuhala PVC ndị eweghị n'isis ụlọọrụ n'AbujaImage caption: Ọnụ na-ekwuru Inec na Taraba steeti ahụ bụ Fabian Yame kwuru na ha ebuhala PVC ndị eweghị n'isis ụlọọrụ n'Abuja
Ebisara na 17:28 Feb 14, 201917:28 Feb 14, 2019
Ndị Benue wa ajị n'ume
Nkwado ntuiliaka na Benue kpụ ọkụ n'ọnụ, jiri mma n'aka.
Ndị uweojii,ndị na-agbanyụ ọkụ, Inec na ndị ọrụ metutara ntuliaka sị n'ụche ha dị ya.
Ndị uweojii dịka ha na-akwado maka ntuliakaImage caption: Ndị uweojii dịka ha na-akwado maka ntuliaka
Ụlọọrụ ndị na-agbanyụ ọkụ sị na ha na-eke nchụcha maka adịghị a ma ama.Image caption: Ụlọọrụ ndị na-agbanyụ ọkụ sị na ha na-eke nchụcha maka adịghị a ma ama.
Onye ọrụ Inec na-ahazị akọrọngwa ntuliaka na Makọdị, Isiobodo BenueImage caption: Onye ọrụ Inec na-ahazị akọrọngwa ntuliaka na Makọdị, Isiobodo Benue
Ebisara na 17:12 Feb 14, 201917:12 Feb 14, 2019
Ndị Kano anaghị achịkwa
Ndị Kano steeti ejighịkwa ntuliaka ga-eme abalị abụọ na-abịa eme ihe ọchị.
Ụfọdụ gara n'ọnọdụ ebe a ga-eme ntuliaka ileta ma aha ha adịkwa n'akwụkwọ ntuliaaka.
Ndị ọrụ Inec na-ejikerekwa n'ike n'ike dịka akọrọngwa a ga-eji mee ntuliaka ruterela ụlọọrụ ha.
Ndị ga-atụ vootu na-ele ma aha ha adịkwa n'akwụkwọ na Kano steetiImage caption: Ndị ga-atụ vootu na-ele ma aha ha adịkwa n'akwụkwọ na Kano steeti
Akọrọngwa a ga-eji tụọ vootu na KanoImage caption: Akọrọngwa a ga-eji tụọ vootu na Kano
Ebisara na 15:45 Feb 14, 201915:45 Feb 14, 2019
Ndị uweojii Ebọnyị sị na ha kwụ gidigbaa
Ebe niile Ebonyị steeti na-ede jiji abalị abụọ tupu ntuliaka ọkwa onyeisiala dịka ndị ọrụ ha metụtara ntụliaka na-ejikere maka Febụwarị 16
Inec na ndi oru nchekwa dị iche iche nwere ogbako n'ulooru ha taa bụ Tọọzde n'Abakiliki.
Ogbako ahụ nyere ọhere irutuaka n'ebe nakwa uzo ogbaghara nwere ike idaputa na ntuliaka nke nozi n'imi n'anya.
Ha dorọwara aka na nti ka ndi mmadu ghara ino ebe a turu vootu na-aru uka maobu gbaa ama ihe ga-eme ka a mara onye ha kwunyeere.
Ụgbọala ngwongworo bubatara akọrọngwa ntuliaka n'ogige Inec dị n'AbakalikiImage caption: Ụgbọala ngwongworo bubatara akọrọngwa ntuliaka n'ogige Inec dị n'Abakaliki
Ndị ọrụ na-ahụ ka o si aga na ntuliakaImage caption: Ndị ọrụ na-ahụ ka o si aga na ntuliaka
Akọrọngwa e ji eme ntuliaka e busara n'ụlọọrụ Inec n'AbakalikiImage caption: Akọrọngwa e ji eme ntuliaka e busara n'ụlọọrụ Inec n'Abakaliki
Ọgbakọ Inec na ndị ọrụ nchekwa dị iche iche nwere n'AbakalikiImage caption: Ọgbakọ Inec na ndị ọrụ nchekwa dị iche iche nwere n'Abakaliki
Imo na-aghọrọ ọkụ
Ndị ọrụ ịhụ ka o si aga ebe ha na-ewere akọrọngwa ha ga-eji rụọ ọrụ n'Inec OwereImage caption: Ndị ọrụ ịhụ ka o si aga ebe ha na-ewere akọrọngwa ha ga-eji rụọ ọrụ n'Inec Owere
Ndị uweojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ n'OwereImage caption: Ndị uweojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ n'Owere
Ndị ọrụ ha metụtara ntuliaka dịka ndị ọrụ ịhụ ka o si aga, ndị uweojii na ntị ọrụ nchekwa, ndị ntakụkọ awuchiela n' Owere, isiobodo Imo Steeti.
Akọrọngwa dị bụ ahụghị ogiri ma e teghị ofe na ntuliaka nke a kpọrọ 'sensitive materials' na bekee ka bụkwa ihe ahụbeghị anya n'Imo. N'ụlọakụ etiti,'Central Bank of Nigeria' ngalaba nke Owere, ndị ntaakụkọ nakwa ndị na-anọchite anya otu pati dị iche iche ahụbeghị ihe ntụliaka a anya.
Otu onye na-arụ ọrụ n' Inec sị ka anyi gharị itinye aha gwara BBC Igbo na ihe ji nkịta ọnwụ esighi ha n'aka.
O kwuru na ndị isi ha nọ n'ime ụlọọrụ CBN ahụ n' ihe gara nke ọma.
Akọrọngwa a ga-eji mee ntuliakaImage caption: Akọrọngwa a ga-eji mee ntuliaka
Ebisara na 14:02 Feb 14, 201914:02 Feb 14, 2019
Inec Anambara si na ha kwụ chịm
Ụlọọrụ Inec Oka, Anambara steeti gbara ọkụ ụbọchị TuuzdeImage caption: Ụlọọrụ Inec Oka, Anambara steeti gbara ọkụ ụbọchị Tuuzde
N'agbanyeghi oku ogbugba nke gbapiara akarangwaoru ndi ulooru Inec n' Oka ụbọchị Tuzde,onyeisi ulooru Inec nke Anambara steeti bụ Nwachukwu Orji kwuru na egwu adighi, na ihe niile ga-aga ka e si choo ya.
Orji kọwara na Inec Anambara enwetazugo ufodu akarangwaoru ndi ahu oku gbapiara site na ihe kariri Steeti asaa n'ala Naijiria.
O duru ndi niile tozuru itu vootu na Steeti Anambara ka ha jikere maka nke n'ihi na agha akara aka anaghị eri ngwọrọ.
Nwachukwu Orji, onyeisi, Inec,Anambara steetiImage caption: Nwachukwu Orji, onyeisi, Inec,Anambara steeti
Igbo bụ Igbo Ndewoonụ o!
Nigeria Elections 2019: Ka o si aga na nkwado ntuliaka
A gbara ogige ndị uweojii ọkụ n'Anambara
Njikere maka ntuliaka a ga-eme ụbọchị Satọde, Febụwari 16, afọ bụ okwu akpụ n'ọnụ.
Anyị ge-ebido site na iwetara gị akụkọ ihe mere n'ụtụtụ taa n'Anambra steeti ebe ọkụ gbara ogige ndị uweojii.
Kọmishọna ndị uweojii n'Anambara steeti bụ Haruna Mohammed, gwara BBC na ụlọọrụ ndị uweojii ahụ dị n'Ajali,n'okpuruọchịchị Orumba- Nọrth, gbara ọkụ n'ụzọ ụtụtụ ụbọchị Tọọzde.
O kwukwara na o nweghi onye uweojii nwụrụ na ya bụ ọkụ nke ndị omekome kpanyere
Haruna kwuru na-eme nyocha gbasara ya.
Ụlọọrụ ndị uweojii na Ajali nke ọkụ gbara...Image caption: Ụlọọrụ ndị uweojii na Ajali nke ọkụ gbara...